Netherlands: Tobankii Arday Midkood ayaa Isticmaala Daawa kordhisa Feejignaanta Maxkaxda – fogaanarag
Layaabka / Wararka / Wararka Holland | By Ali Dahir
Mid ka mid ah Tobankii Arday ee Hollandees ah ayaa isticmaala daawo ka caawisa feejignaanta maskaxda oo ay si habsami leh diiradda ugu saaraan waxbarashada iyo dhamaan ficilada kale ee la xiriira nolol maalmeedkooda.
Sida uu baahiyay TV Nos, Daawada ugu badan ee ay isticmaalaan waa (Ritalin) oo lagu daweeyo hoos u dhaca feejignaanta Maskaxda ee loo yaqaano ADHD (attention deficit disorder ADHD).
Amphetamines iyo Adderall ayaa sidoo kale ka mid ah daawooyinka caanka ah ee lagu daweeyo cudurkaan, Boqolkiiba 77% ardeyda isticmaasha ee lagu wareystay warbixinta laga diyaariyay ayaa sheegay in ay ka helaan asxaabtooda.
23% kalena waxaa ay sheegeen in ay ka iibsadaan websiteyadda online ama dad ka ka ganacsada oo ay ka iibsadaan.
“Waa kaniini iga caawinaya in aan u ordo si joogta ah, si habsami lehna ula socdo waxa igu hareereysan haba ugu horeyso waxbarashada” sidaasi waxaa yiri arday isticmaala oo la hadlay TV ga NOS.
Warbixinta laguma sheegin tirada ardayda ka qeyb gashay daraasadaan ee lagu ogaaday in mid ka mid ah tobankii arday midkood uu isticmaalo kaniiniga kor u qaada feejignaanta Maxkaxda.
Daawadaan ayaa lagu sheegay in ay la mid tahay maandooriyayaasha la qabatimo oo haddii qofka uu qabatimo uu waynaayo caadi u shaqeyntii maskaxdiisa sidaas darteedna ku qasban in uu raadiyo markasta oo ay qabato, mana ahan wax sharci ah in uu adeegsado qof uusan u qorin dhaqtar.